Arrinta kala qeybisay xubnaha Midowga Musharaxiinta Mucaaradka oo la shaaciyey | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Arrinta kala qeybisay xubnaha Midowga Musharaxiinta Mucaaradka oo la shaaciyey
Muqdisho (Dalkaan.com) – Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ahna musharax u taagan xilka madaxweynimo ee Soomaaliya oo wareysi siiyey telefishanka Universal ayaa markii u horeysay ka hadlay dooda kala qeybisay Midowga Musharaxiinta Mucaaridka.
Doorashada maanta. Caqabaddaha dalka yaala. Hogaamiyaha loo baahanyahay iyo rajada shacabka.
Arsenal oo kula biirtay kooxaha Manchester United iyo Liverpool tartanka loogu...
Xiisadda Camaara oo badashay jawiga doodda doorashada Soomaliya
Barcelona oo aaminsan in Man United ama Juventus ay heshiis hordhac...
Manchester City 1-0 Wolves: Manchester City oo Dirqi ku badisay siina...
Aqriso: Magacyada guddiga xulista ergooyinka 6 kursi oo HirShabelle ah oo...
Hooyo Soomaaliyeed oo Maxkamadda Yurub kaga adkaatay dowladda Norway oo ka...